As of Tue, 14 Jul, 2020 03:20
जिल्लाको सदरमुकाम–तोक्मेडाँडा हुँदै सुकेटारसम्मको पर्यटकीय पैदलमार्ग निर्माणले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि निर्माण सुरु भएको यो पदमार्गमा यसवर्ष १५ लाख विनियोजन भएको छ । मेची पहाडी क्षेत्र प्रवद्र्धन विकास समिति इलामबाट १५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । फुङलिङ नगरपालिका–७ का वडाअध्यक्ष राजन गुरुङका अनुसार वडालाई अख्तियारी आएकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी तत्काल काम सुरु गरिएको हो ।
अध्यक्ष गुरुङले भने, “पदमार्ग साँच्चै रमणीय बन्दैछ । जनप्रतिनिधि र स्थानीय जतिसक्दो चाँडो पदमार्ग सुकेटार पुरयाउने हतारमा छौं ।” तोक्मेडाँडा–सुकेटार पैदलमार्ग उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मोहन पालुङवाका अनुसार यसपटक स्टमेटअनुसार करिब ३ सय मिटर पैदल मार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । यसअघि करिब ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सांसद विकास कोष,तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र मेची पर्यटन विकास समितिबाट उक्त रकम विनियोजन भएको थियो ।
पैदलमार्गका सूत्रधार तथा वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्चका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रकाश भट्टराईले पैदलमार्ग जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भट्टराईका अनुसार जिल्ला भिœने पर्यटकको पहिलो नजर नै पैदलमार्गमा पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने तर्क गरे । तोक्मेडाँडा–सुकेटार सडकमार्ग १० किलोमिटरको दूरी छ भने पैदलमार्ग करिब ३ हजार मिटरको दूरी पर्छ । तीन भागको एक भाग अर्थात करिब एक हजार मिटर पैदलमार्ग तोक्मेडाँडा सामुदायिक वनभित्र पर्छ । बाँकी डाँडैडाँडाको भाग पर्छ ।
यो पदमार्गबाट प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा,कंञ्चनजंघा (८,५८६मी.), कुम्भकर्ण (७,७१०मी.), नागबेली आकारमा बगेको तमोर नदी, ताप्लेजुङसहित पाँचथर र तेह्रथुमका डाँडाकाडादेखि समथर भु–भाग समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो पदमार्गमा चैत वैशाखमा मनै लोभ्याउने गरी रताम्मे हुने गरीको गुँरास फुल्छ । पदमार्गमा ढुङ्गा बिच्छ्याइएको छ । दायाँबायाँ रेलिङ प्रयोग गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा बनाइएको चौताराले उकालो पदमार्गको यात्रा सजिलो बनेको छ । विहानीको समयमा मर्निङ वक गर्नेहरु भेटिन्छन । हिँड्डुल गर्न तथा पाथीभरासम्म पनि हिँडेरै जान रुचाउनेका लागि यो पैदलमार्गले सहजता मिलेको छ ।
यसैबीच यो पैदलमार्गलाई लक्षित गर्दै तोक्मेडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सहिद पार्क निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश नं. १ सरकारले उपभोक्ता समितिसँग साझेदारी गरेर निर्माण प्रारम्भ गरिएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री परागले जानकारी दिए । यसवर्ष १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट भएकाले पर्यटनसँग जोड्न अनुकूल भएको अध्यक्ष परागले बताए । सहिद पार्कसहित भ्यू–टावर, वनभोजस्थल, मठ तथा मन्दिर र स्वीमिङलगायत निर्माण हुने डीपीआर बनेको छ । स्थानिय अमिर मादेनले भने, “पाथीभरा र कंञ्चनजंघा घुम्न लाखौ पर्यटक आउँछन् । तर, सदरमुकाममा एक दिन अड्याउन मिल्ने गरिएको पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लागि परेका हौं ।” होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेश खवासका अनुसार होटलमा बस्ने अधिकांशले नजिकै घुमफिर गर्ने स्थलका बारेमा सोध्ने गरेको अनुभव सुनाए । अध्यक्ष खवासले भने, “अब त पर्यटकीय पदमार्ग र सहिद पार्कले पक्कै टेवा मिल्ला कि !”
सदरमुकाम–तोक्मेडाँहुँदै सुकेटार पर्यटकीय पैदलमार्ग ।